မြင်သူတိုင်း စွဲမက်သွားစေမယ့် ခြူးလေးနဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်းတို့ရဲ့ အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
By Shwe BaPosted on February 19, 2021
မင်း သမီး ချောလေး ခြူးလေး က သရုပ် ဆောင် မင်းသမီးချော လေး နန်းစန္ဒာလှထွန်း နဲ့ အတူ ရိုက်ကူး ထားတဲ့ Tiktok ဗီဒီယို လေးကို တင် ပေးလာ တာ ပါ..။ကျောင်းစိမ်း ဝတ်စုံ လေး နဲ့ ကျက်သရေ ရှိရှိ လှနေ တဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက်က သီချင်းလေး ရဲ့ စည်းချက် အတိုင်း ဟန်ချက် ညီညီ ဆော့က စားထား တဲ့ အခွီးဗီဒီယို လေး ကို တင်ပေး လာတာ ဖြစ် လို့ ချစ်ပရိသတ် တွေအ တွက် ပြန်လည်တင် ဆက် ပေးလိုက် ပါ တယ်..။
ကဲ ချစ် ရ တဲ့ ပရိသတ်တွေ က လည်း ခြူးလေးနဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်း တို့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး ကို ကြည့်ပြီး အ သည်းလေး တွေပေး ခဲ့ ဖို့ မမေ့လိုက် ပါ နဲ့ နော် … . ချစ် ပရိသတ်ကြီး ရေ သရုပ်ဆောင် ခြူးလေး ကတော့ ဇာတ်လမ်း တွဲ တွေမှာ စတင် သရုပ်ဆောင် ရင်း အနုပ ညာလောကထဲ ကို ဝင် ရောက်လာခဲ့ တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … .
ခြူးလေး က ပီပြင် တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှု တွေနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေ ပြီး သူမရိုက် ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေကိုလည်း ပရိသတ် တွေ က အကြိုက်တွေ့ နေကြ တာ ပါ … . ခြူး လေး က လတ်တလော မှာ တော့ ဇာတ်လမ်း တွဲ အသစ်တစ်ခု ကို ရိုက်ကူး နေပြီး ကြော်ငြာ တွေနဲ့ photo shooting တွေ ကိုလည်း လက်ခံရိုက် ကူးနေ သူ ပါ … .သူမ ရဲ့ လှုပ်ရှား မှု ပုံရိပ် လေး တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာထက် မှာ မကြာခဏ ဆိုသလို တင်ပေး လေ့ရှိ နေတဲ့ ခြူးလေးက ယနေ့ မှာ လည်း ပိုစ့်တစ်ခု တင် ပေးလာ ခဲ့ပါ တယ် နော် … .
crd : tik tok myanmar
မင္း သမီး ေခ်ာေလး ျခဴးေလး က သ႐ုပ္ ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာ ေလး နန္းစႏၵာလွထြန္း နဲ႔ အတူ ရိုက္ကူး ထားတဲ့ Tiktok ဗီဒီယို ေလးကို တင္ ေပးလာ တာ ပါ..။ေက်ာင္းစိမ္း ဝတ္စုံ ေလး နဲ႔ က်က္သေရ ရွိရွိ လွေန တဲ့ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္က သီခ်င္းေလး ရဲ့ စည္းခ်က္ အတိုင္း ဟန္ခ်က္ ညီညီ ေဆာ့က စားထား တဲ့ အခြီးဗီဒီယို ေလး ကို တင္ေပး လာတာ ျဖစ္ လို႔ ခ်စ္ပရိသတ္ ေတြအ တြက္ ျပန္လည္တင္ ဆက္ ေပးလိုက္ ပါ တယ္..။
ကဲ ခ်စ္ ရ တဲ့ ပရိသတ္ေတြ က လည္း ျခဴးေလးနဲ႔ နန္းစႏၵာလွထြန္း တို႔ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလး ကို ၾကည့္ၿပီး အ သည္းေလး ေတြေပး ခဲ့ ဖို႔ မေမ့လိုက္ ပါ နဲ႔ ေနာ္ … . ခ်စ္ ပရိသတ္ႀကီး ေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ ျခဴးေလး ကေတာ့ ဇာတ္လမ္း တြဲ ေတြမွာ စတင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ရင္း အႏုပ ညာေလာကထဲ ကို ဝင္ ေရာက္လာခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
ျခဴးေလး က ပီျပင္ တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈ ေတြနဲ႔ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေန ၿပီး သူမရိုက္ ကူးထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲ ေတြကိုလည္း ပရိသတ္ ေတြ က အႀကိဳက္ေတြ႕ ေနၾက တာ ပါ … . ျခဴး ေလး က လတ္တေလာ မွာ ေတာ့ ဇာတ္လမ္း တြဲ အသစ္တစ္ခု ကို ရိုက္ကူး ေနၿပီး ေၾကာ္ျငာ ေတြနဲ႔ photo shooting ေတြ ကိုလည္း လက္ခံရိုက္ ကူးေန သူ ပါ … .သူမ ရဲ့ လႈပ္ရွား မႈ ပုံရိပ္ ေလး ေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာထက္ မွာ မၾကာခဏ ဆိုသလို တင္ေပး ေလ့ရွိ ေနတဲ့ ျခဴးေလးက ယေန႔ မွာ လည္း ပိုစ့္တစ္ခု တင္ ေပးလာ ခဲ့ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Next post အသဲယားစရာတွေ ထပ်လုပ်ပြလိုက်ပြန်တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်ရဲ့ စပါယ်ရှယ် ဗီဒီယိုလေး